Kedu otu esi emepụta azụmaahịa dijitalụ nke gị nke ọma | ECommerce ozi ọma
Ọtụtụ ndị kwenyere na ahịa n'ịntanetị na ikpo okwu e-commerce nwere ike ịbụ otu ihe ahụ. Ọ bụ eziokwu na a na-eji ha abụọ maka ebumnuche azụmaahịa n'ịntanetị, mana enwere ọdịiche dị oke mkpa n'etiti ha. Weebụsaịtị nke ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmahịa n'ịntanetị nwere ike ịbụ ohere azụmaahịa n'oge a n'ihi njirimara pụrụ iche nke netwọkụ azụmahịa ya.
Na mgbakwunye, ọ na-enye gị ohere ịzụlite ọrụ ọkachamara gị na mpaghara dị iche iche dabere na mmasị na nka gị. Ruo n'ókè ị nwere ike ịhọrọ azụmahịa dijitalụ na ụwa nke ejiji, egwuregwu, oge ezumike ma ọ bụ ntụrụndụ. Nweghi oke ebe ị ga-aga ịmalite echiche nke aka gị. N'ihi na ihe dị mkpa dị mkpa bụ na ị nwere oke mmụọ maka ọrụ a.
N'ime usoro a, ọ dị ezigbo mkpa na site na oge a ị kọwaa ebe ịchọrọ iduzi ọrụ azụmahịa gị. Maka nke a, ọ dị mkpa na a ga-enyocha ma ọ bụ kesaa ya na ndị ọzọ nọ n'otu ọnọdụ. Na njedebe nke ihe ọ gbasara bụ inweta ahụmịhe kachasị iji rụọ ọrụ gị yana na ọ naghị anọgide na drawer nke nchefu. Nke a bụ onye iro kachasị nke ị ga-eji lụọ ọgụ site na ugbu a.
1 Azụmaahịa dijitalụ: karịa ọchịchọ
2 Kwụpụ 1: Bido azụmahịa nke na-egbo mkpa
3 2kwụ na XNUMXkwụ XNUMX: Dee otu nke na-ere
4 Nzọụkwụ 3: Chepụta ma wuo weebụsaịtị gị
5 Kwụ na Estkwụ 5: Guzosie Onye Ọkachamara mara aha gị
6 Mejuputa atumatu di ire
7 Zụlite nkà ndị dị mkpa
8 Chọrọ enyemaka site na ndị ọzọ
9 Bụrụ onye nkwekọrịta tupu ị ghọọ onye nchoputa
Azụmaahịa dijitalụ: karịa ọchịchọ
Gaghị echefu na ọrụ ịntanetị a chọrọ usoro nke ị ga-agbakwunye na paspọtụ azụmahịa gị. Ebee, ọ naghị adị mfe mgbe niile imezu ya ma yabụ na mpaghara ahụ bụ ebe ịkwesịrị itinye uche na oge a. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, imepụta azụmaahịa dijitalụ nke gị anaghị adị mfe mgbe niile. Ọ bụrụ na ọ bụghị, na Kama nke ahụ, ọ chọrọ mgbalị ụfọdụ n'akụkụ gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ n'ezie igbo mkpa a pụrụ iche.
Ka ị nwee ike mezuo ebumnuche a, anyị ga-akara usoro ntuziaka ndị ga-emezu kpamkpam site na atụmatụ gị dị ka onye ọchụnta ego dijitalụ ma ọ bụ nke dị n'ịntanetị. Ya mere, nke nta nke nta ị nwere ike ikpuchi ụfọdụ n'ime ihe mgbaru ọsọ gị kachasị mma. Ebe ọ bụla, ị enweghị obi abụọ na enwere usoro usoro ị ga - eme iji hụ na ị ga - enwe ihe ịga nke ọma mgbe ịmalitere obere azụmaahịa dị n'ịntanetị. Ahụwo m ọtụtụ puku ndị mmadụ ka ha bido ma too azụmaahịa na-aga nke ọma site na ịme ihe ndị a:
Chọta mkpa ma jupụta ya.
Dee otu akwụkwọ nke na-ere.
Chepụta ma wuo ebe nrụọrụ weebụ enyi na enyi.
Jiri engines ọchụchọ iji chụpụ okporo ụzọ na saịtị gị.
Mepụta aha dị ka ọkachamara maka onwe gị.
Soro ndị ahịa gị na ndị debanyere aha gị site na email.
Dịkwuo gị ego site na ndabere ahịa na nkwado ahịa.
Onye ọ bụla site na newbie na onye na-azụ ahịa n'ịntanetị nwere oge nwere ike irite uru na usoro a site n'ịmụta otu esi amalite azụmahịa n'ịntanetị.
Kwụpụ 1: Bido azụmahịa nke na-egbo mkpa
Imirikiti ndị mmadụ na-amalite ịmalite ihie ụzọ nke ịchọ ngwaahịa na mbụ ahịa.
Iji mee ka o nwekwuo ohere ịga nke ọma, bido n’ahịa. Ihe aghugho bu ichota otu ndi mmadu na acho ihe ngwọta nye nsogbu, ma achotaghi otutu ihe. Makesntanetị na-eme ka ụdị nyocha ahịa a dị mfe:
Gaa na nzukọ ịntanetị iji hụ ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ na nsogbu ndị ha na-anwa idozi.
Mee isiokwu nyocha iji chọta isiokwu ndị mmadụ na-achọ, mana ị nweghị asọmpi dị ukwuu na saịtị ndị ọzọ.
Lelee ndị asọmpi gị nwere ike ịga site na ịga na saịtị ha ma rịba ama ihe ha na-eme iji mezuo ọchịchọ ahụ. Mgbe ahụ ị nwere ike iji ihe ị mụtara wee mepụta ngwaahịa maka ahịa dị adị, ma mee ka ọ ka mma karịa asọmpi ahụ.
2kwụ na XNUMXkwụ XNUMX: Dee otu nke na-ere
Onwere ihe nlere ahia edetu nke na-eme ka ndi nleta bia ahia site na mgbe ha rutere rue mgbe ha zutara:
Gosipụta mmasị na isi okwu gbara ọkpụrụkpụ.
Kọwaa nsogbu ngwaahịa gị na-edozi.
Mee ka ntụkwasị obi gị dị ka onye na-edozi nsogbu.
Tinye akaebe nke ndị jirila ngwa ahịa gị.
Kwuo maka ngwaahịa a na otu o si abara onye ọrụ uru.
Mee nkwa siri ike.
Mepụta ngwa ngwa.
Jụọ maka ire ere.
N'ime otu oyiri gị, ikwesiri ilekwasị anya na otu ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị si dị iche na-edozi nsogbu ndị mmadụ ma ọ bụ na-eme ka ndụ ha ka mma. Chee echiche dị ka onye ahịa ma jụọ "Gịnị bụ n'ime ya maka m?"
Nzọụkwụ 3: Chepụta ma wuo weebụsaịtị gị
Ozugbo inwere ahia na ngwa ahia gi ma kpoo ahia ahia gi, i di ugbu a maka imewe ahia obere webusaiti gi. Cheta ime ka ọ dị mfe. I nwere ihe na-erughị sekọnd ise iji dọta uche mmadụ ... ma ọ bụghị ya, ha ga-apụ ma ghara ịhụ ibe ha ọzọ. Fọdụ ndụmọdụ dị mkpa iburu n'uche:
Họrọ mkpụrụ edemede abụọ ma ọ bụ abụọ dị nfe na ndabere ọcha.
Mee ka ntughari gị doo anya ma dịkwa mfe, ma mee ka ọ dị otu na ibe niile.
Jiri naanị eserese, ọdịyo ma ọ bụ vidiyo ma ọ bụrụ na ha kwalite ozi gị.
Gụnye ntinye ịpụ apụ ka inwee ike ịnakọta adreesị email.
Mee ka ịzụ ahịa dị mfe: ọ bụghị naanị ihe abụọ dị n'etiti atụmanya na ndenye ọpụpụ.
Ebe nrụọrụ weebụ gị bụ ihe ngosi ntanetị gị, ya mere mee ka ọ dịrị ndị ahịa mfe.
Kwụpụ 4: Jiri igwe nchọ iji dọta ndị na-azụ ahịa na weebụsaịtị gị.
Mgbasa ozi nkwụnye ụgwọ kwa-ụzọ bụ ụzọ kachasị mfe iji nweta ahịa na saịtị ọhụrụ. Ọ nwere uru abụọ karịa ichere maka okporo ụzọ ịbịakwute gị na-arụ ọrụ. Nke mbụ, mgbasa ozi PPC pụtara na ibe ọchụchọ ozugbo, na nke abụọ, mgbasa ozi PPC na-enye gị ohere ịnwale isiokwu dị iche iche, yana isi okwu, ọnụahịa, na ire ahịa na-eru nso. Ọ bụghị naanị na ị na-enweta okporo ụzọ ozugbo, mana ị nwekwara ike iji PPC mgbasa ozi iji chọpụta isi okwu ntụgharị gị. Nwere ike kesaa mkpụrụokwu ahụ na saịtị gị na kọọpị na koodu gị, nke ga - enyere aka ogo gị na nsonaazụ ọchụchọ organic.
Kwụ na Estkwụ 5: Guzosie Onye Ọkachamara mara aha gị
Ndị mmadụ na-eji tontanet achọ ihe. Nye ozi ahụ n'efu na saịtị ndị ọzọ, ị ga-ahụkwu okporo ụzọ na njikwa njin ọchụchọ kacha mma. Ihe nzuzo bụ ka itinye njikọ gị na saịtị gị na ozi ọ bụla.
Nye ọdịnaya n'efu na ọkachamara. Mepụta edemede, vidiyo, ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla ndị mmadụ hụrụ bara uru. Kesaa ọdịnaya ahụ site na akwụkwọ ndekọ ederede n'ịntanetị ma ọ bụ saịtị mgbasa ozi mmekọrịta.
Gụnye njikọ "zigaara enyi gị" na ọdịnaya weebụ gị bara uru.
Bụrụnụ ndị na-arụsi ọrụ ike ọkachamara na ụlọ ọrụ forums na-elekọta mmadụ media saịtị ebe gị iche ahịa dị.
Njikọ: Otu esi emepụta Facebook Messenger Chatbot na-enweghị Koodu
Ga-erute ndị na - agụ akwụkwọ ọhụrụ. Mana ka mma, saịtị ọ bụla na-ebipụta ọdịnaya gị ga-enwe njikọ nke gị. Search engines hụrụ njikọ sitere na saịtị dị mkpa ma kwụọ gị ụgwọ na ọkwa.
Nzọụkwụ 6: Jiri ike Email Marketing were tọghata ndị ọbịa na ndị na-azụ ahịa.
Mgbe ị na-ewu ndepụta nke nhọrọ, ị na-eke otu n'ime akụ kachasị baa uru nke azụmahịa gị n'ịntanetị. Ndi ahia gi na ndi debanyere gi aka nyere gi ikike izigara ha email. Nke ahụ pụtara:
Na-enye ha ihe ha rịọrọ.
Na-emepe emepe mmekọrịta gị na ha.
Azịza ya bụ 100 percent measurable.
Marketingre ahịa email dị ọnụ ala karịa ma dị irè karịa mbipụta, telivishọn, ma ọ bụ redio n'ihi na ebubere ya oke.
Onye ọ bụla na-aga na saịtị gị wee họrọ ndepụta gị bụ ezigbo ndu na-ekpo ọkụ. Onweghi ihe ozo di nma kariri email ichoputa ihe ndi ahu.
Kwụ na Increkwụ 7: Dịkwuo gị ego site na ala ahịa na upselling.
Otu n’ime azum ahia ahia Ntanetị kachasị dị mkpa bụ ịzụlite ndụ onye ahịa ọ bụla. Ọ dịkarịa ala, pasent 36 nke ndị zụtara gị otu oge ga-azụta gị ọzọ ma ọ bụrụ na ị gbasoro. Imechi ire ere mbụ ahụ bụ akụkụ kachasị sie ike, na-ekwughị nke kachasị ọnụ. Yabụ jiri ire ahịa nkwado na ire ahịa iji mee ka ha zụta ọzọ:
Nye ngwaahịa ndị ga-agbakwunye zụọ mbụ gị.
Zipu Kupọns kọmputa na-eguzosi ike n'ihe ka ha nwee ike ịgbapụta na nleta ha ọzọ.
Nye ngwaahịa ndị metụtara gị na ibe "I meela" mgbe ha zụrụ.
Nye ndị ahịa gị ụgwọ maka iguzosi ike n'ihe ha, ha ga-aghọkwa ndị na-eguzosi ike n'ihe.
Mejuputa atumatu di ire
Ntanetị na-agbanwe ngwa ngwa nke na otu afọ n'ịntanetị dịka ihe dị ka afọ ise na ụwa n'ezie. Mana ụkpụrụ nke otu esi amalite ma bulie azụmaahịa na-aga nke ọma n'ịntanetị agbanwebeghị ma ọlị. Ọ bụrụ n’ịmalitere obere azụmaahịa dị n'ịntanetị, soro usoro a. Ọ bụrụ na ịnọ na ntanetị ogologo oge, mee nyocha ngwa ngwa wee hụ ma enwere usoro ọ bụla ị na-eleghara anya ma ọ bụ na ị gaghị eme ya na mbụ. Nwere ike ghara ịga na-ezighị ezi na ihe ndị bụ isi.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmepụta ụlọ ọrụ na-azụ ahịa ihe karịrị afọ 25 gara aga, ihe mgbochi ịbanye bụ nnukwu ihe. Site na ntanetị dijitalụ oge ochie, ihe dị n'elu iji mepụta ọrụ dị otú ahụ bụ ihe na-emenye ụjọ, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume na-enweghị ego mbụ. Na mgbakwunye na ọnụahịa mmalite, ọ bụ naanị na mgbasa ozi anụ ahụ na nke ọdịnala na isi ọwụwa metụtara ihe niile, mana imepụta ihe yiri nloghachi na itinye ego maka ndị ahịa gị. Bụ "n'ime uhie" ruo ogologo oge, ogologo oge bụ ihe a na-apụghị izere ezere.
Oge agbanweela. Ọ gaghị ekwe omume iche na onye nwere nkà ma ọ bụ obere otu nwere ike ịmepụta ụlọ ọrụ na-ere ahịa zuru oke site na ncha na ọnwa ole na ole (site na enyemaka dị ntakịrị).
Ndị ụlọ ọrụ na-emefu ego ha na-emefu na mgbasa ozi dijitalụ karịa mgbe ọ bụla ọzọ, onye ọ bụla chọrọ otu ihe ahụ. N'ime akwụkwọ ntuziaka a, aga m agagharị gị site na usoro ise ịkwesịrị ịme ma ọ bụrụ na ịchọrọ iwu ụlọ ọrụ na-ere ahịa n'ịntanetị site na ncha (tụkwasị m obi, anọ m ebe ahụ).
Zụlite nkà ndị dị mkpa
Ihe ngosi ntanetị. Ọ bụrụ na ị bụ onye narcissistic onye nwere nnukwu ọhụụ nke ịbụ Neil Patel ozugbo ị nabatara diplọma gị, ị nwere ike ịda mba nke ukwuu.
Nwere ike ịbụ onye okike na onye nwere ọgụgụ isi dị ka onye ọ bụla n'ime egwuregwu ahụ, mana ọ bụrụ na ịkwadebebeghị ma ọ bụ nwee ahụmịhe iji merie ọtụtụ nuances nke njikwa akaụntụ na mmekọrịta ndị ahịa, ị ga-achọta ọrụ ọzọ ngwa ngwa. O nwere ike iwe ọtụtụ afọ tupu ụfọdụ ndị chọrọ ịzụlite nkà ndị dị mkpa, ọ ga-ewe ndị ọzọ obere. Ka o sina dị, echere m na ọ dị gị mkpa ijide ezigbo ọrụ ruo oge ụfọdụ tupu ị kwụsị ịga n'onwe gị.
Ebe ọrụ dị mgbagwoju anya karịa ka anyị na-eche mgbe anyị na-arụ ọrụ n'ime ha. N’ezie ọrụ ị rụpụtara bụ ọtụtụ atụmanya, mgbatị ahụ na nkwukọrịta okwu, na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ihe ọ bụla site na otu esi ahazi nzukọ ya na ọdịbendị ya, ngwaahịa ya, na iduzi ya na-ekere òkè n'otú ụbọchị gị (na ọrụ gị) si apụta.
Tupu ị nweta ikike ịzụ ahịa dijitalụ gị, ịkwesịrị ịnata ihe ọ dị ka ịrụ ọrụ ebe ndị ahịa gị nwere ike ịrụ ọrụ. Nke a ga - eme ka ị bụrụ ọkachamara zuru oke na nke ọma. Mgbe ndị ahịa gị nwere nrụgide na ikekwe ịkọwapụta ya na gị, ịgaghị ewere ya n'onwe gị.
Chọrọ enyemaka site na ndị ọzọ
Nweta enyemaka ndị ọzọ na-eto eto gị na ndu anyị n'efu: ayszọ ndị ọzọ iji merie ma jigide ndị ahịa ọzọ
Na nke ahụ kwuru, ọ dị mkpa ịghọta na nkà dị nro bụ naanị 50% nke ngwaahịa ikpeazụ ị bụ. Kwesiri ịdị mma na ihe ị ga-enye dị ka ọrụ "ọkachamara". N'agbanyeghi otu ahia ahia gi siri di, onye ahia gha eme ka amara na erere ha mmanu. Ikwesiri inwe ike nweta nsonaazụ. Ọ bụrụ n’ị na - amalite ọrụ gị ijikwa ndị ahịa maka ụlọ ọrụ buru ibu, ana m agba gị ume ịmalite ịrụ ọrụ na otu ahịa ma ọ bụ ịnakọta obere ndị ahịa pere mpe iji mụta ọwa na nka ị ga - eme.
Ihe doro anya nye ndị na-adịtụbeghị n'ahịa ahịa bụ ego ole etinyeworo na ya. Ewezuga nrụgide nke imepụta, ị ga-amụta usoro dị mgbagwoju anya, ma ọ bụrụ na ndị otu gị pere mpe, ị ga-azụlite ụdị nka dị iche iche iji nweta ọbụna mkpọsa kachasị mfe na ala.
Nke a metụtara, mana ọnweghị oke na:
Mee ọdịda peeji
Emebe Mgbasa ozi esighi na
Mee izi ozi na idozi
Usoro mmụta dị ka Marketo, HubSpot, na Salesforce
Ọma mejuputa Chọpụta
Imefu ọtụtụ awa n'elu ugwu naanị iji hụ ka ọ daa
Nnukwu nrụgide iji mepụta
Uru nke ijikwa ndị ahịa bụ na a na-elekọta ọtụtụ akụkụ ndị a tupu ha erute gị. Agbanyeghị, inwe ahụmịhe nke ịrụ ọrụ na ihe ndị a na-enye gị uru bara uru nke ịmara n'ezie ihe ị na-ekwu maka ya mgbe ihe ha nyere gị anaghị arụ ọrụ. Ọ ga - enyere gị aka ịnagide nrụgide ị ga - eweta nsonaazụ ọma n'ihi na ị nọrọ ebe ahụ tupu… ọtụtụ oge.
Bụrụ onye nkwekọrịta tupu ị ghọọ onye nchoputa
Inwe ọrụ ịkwụ ụgwọ nke ga - enyere gị aka ịwa ahụ ụbụrụ na-enweghị ụgwọ ndụ oge niile bụ okomoko ọtụtụ n’ime anyị na-eji egwu egwu. Akingnweta itu a site na ịrụ ọrụ maka onwe gị nwere ogologo ndepụta nke ihe egwu dị na ọ nwere ike ịbụ ọkwa blog dị iche. Ihe na-ebelata ọtụtụ ihe egwu ahụ bụ iwulite ntọala azụmaahịa tupu ịme mkpebi ịme ya oge niile. M na-atụ aro ka ị na-arụ ụfọdụ ọrụ ọrụ oge maka oge ijide ọrụ oge niile maka ọtụtụ ebumnuche, gụnyere ...
Ọ na - enye gị ohere ịrụ ọrụ n’onwe gị n’enweghi ọtụtụ ihe egwu. N'echiche a, echefula site ugbu a gaa n'ihu na ị nwere ụdị azụmaahịa azụmaahịa mgbe ịmalitere ịme ụfọdụ aro anyị gosipụtara n'isiokwu a. N'ihi na, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ihe ọ bụ na njedebe nke ụbọchị bụ na ị mezuru ụfọdụ n'ime nrọ gị na mpaghara azụmahịa dijitalụ. Maka nke a, ịnọgidesi ike n’ihe ga-abụrịrị otu n’ime ngwa ọgụ kachasị ike gị ugbu a. Ọ ga - enyere gị aka iru ọtụtụ ihe karịa ka ị na - eche site na mbido. Ya mere na n'ikpeazụ ị ga-enweta ihe ịga nke ọma karịa echiche ndị ọzọ. Ebe ahia dijitalụ nwere ike inyere gị aka na ọchịchọ ndị a ị nwere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » Kedu otu esi emepụta azụmaahịa dijitalụ nke gị nke ọma